यस क्षेत्रमा तपाईको उमेदवारी किन ? के छ तपाइसंग यस छेत्रको विकासका एजेन्डा ? - nayakhoj24.com
प्रकाशित मिती: November 29, 2017 | nayakhoj24 admin पढ्न:0मिनेट
बुटवल १३ मंसिर । देशभरी वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रुपमा निर्वाचनको रुपमा भाग लिएका दुईवटा समुहको बीचमा प्रतिशपर्धा हुदैछ । वाम गठबन्धनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रहेका छन् । बाम गठबन्धन संग केही स्वतन्त्र समुहको समेत सहभागिता रहेको पाईन्छ । बाम गठबन्धनले अन्य बाम घटकलाई खास समेट्न सकेन । यसले गर्दा थोरै मतले हार्ने स्थानहरु समेत रहन सक्छन् । यता नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र नया शक्ति समेतको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले अन्य लोकतान्त्रिक दलहरुलाईसमेट्न सकेको छैन । कतिपय स्थानमा थोरै मतले हार्नु पर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा समेत हुने सम्भावना धेरै रहन सक्छ । स्थानीय निर्वाचनमा साझेदारी गरेका दलहरुले अहिले फरक दल संग गठबन्धन गरेका छन् ।
गठबन्धनको लागि कुनै एजेन्डा मिल्नु पर्ने देखिदैन । जसरी हुन्छ सत्तामा पुगेर राज गर्नकै लागि गठबन्धन हुने कुरा स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधी सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनले प्रमाणित गरेको छ । देश भरीको कुरा गर्ने हो भने कतिपय क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन वीचमानै पनि प्रतिशपर्धा गरेको पाईन्छ । रुपन्देहीको क्षेत्र नं. १ मा बाम गठबनधन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन वीच प्रतिशपर्धा रेहेको छ । प्रतिनिधी सभाको लागि बाम गठबन्धनवाट नेकपा एमालेका छविलाल बिश्वकर्मा र लोकतान्त्रिक गडबन्धनवाट नेपाली कांग्रेसका अब्दुल रज्जाकको प्रतिशपर्धा रहेको छ ।
त्यसै गरी प्रदेश सभा १ मा बाम गठबन्धनको तर्फवाट नेकपा एमालेका डा. कृष्ण न्यौपाने, र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फवाट राप्रपा प्रजातान्त्रिकका ताहिर अली वीच प्रतिशपर्धा रहेको छ । यस क्षेत्रमा मधेशी दलको र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उमेदवारको समेत बलियो उपस्थिती रहेको छ । त्यसै गरी प्रदेश सभा २ मा बाम गठबन्धनको तर्फवाट नेकपा माओबादी केन्द्रका ददिराम न्यौपाने(माधव शर्मा)को उमेदवारी रहेको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फवाट हरी न्यौपानेको उमेदवारी रहेको छ । यस प्रदेश क्षेत्रमा पनि अन्य दलको बलियो उमेदवारी रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनवाट वागी उमेदवार समेत रहेको कारण लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कठिनाई हुने बिष्लेषण हुने गरेको छ । दुबै गठबन्धनले जितको दावी गरिरहदा चुनावी माहोल भने दुवै गठबन्धनको तातिरहेको छ । निर्वाचनको लागि अझै धेरै दिन बाकी रहेको कारण तत्काल यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन । निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा एकले अर्कोलाई गाली गलौज गर्ने कार्य सुरु भएको छ । यसवाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन सक्ने कुरा प्रति शंका रहन सक्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा सम्पन्न गर्न दल र उमेदार ईमान्दार हुनु पर्दछ । यस कार्यमा आम नागरिकको भूमिका महत्वपुर्ण रहन्छ ।
संयुक्त वाम गठबन्धनका उमेदवार
क्षेत्र नं. १, रुपन्देही
१. यस क्षेत्रमा तपाईको उमेदवारी किन ?
रुपन्देहीको क्षेत्र नं. १ मा मेरो उमेदवारी आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हो । देश भरिमै अत्यन्त धेरै सम्भावना रहेको यस क्षेत्रलाई देशकै नमुना क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ऐतिहासिक महत्व बोकेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका धेरै पुरातात्विक स्थलहरु रहेका छन् ।
यिनीहरुको संरक्षण संवद्र्धन र प्रचारप्रसार गरेर पर्यटनको बिकास गर्न सकिन्छ । यी सबै सम्भावनाहरु पुरा गर्न लुम्बिनी बिकास कोषसंग जोड्दै देवदह बिकास समिति गठन गर्नु आवश्यक छ । यसकार्यको लागि म निरन्तर लाग्नेछु । यस क्षेत्रमा अब्यवस्थित बसोवासी समस्या समाधान गर्न र जग्गा जमिनसंग रहेका बिभिन्न समस्याहरु समाधान तत्काल गरी आम नागरिकलाई मालिक बनाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा रहेका कलेजहरुको स्तरबृद्धि गर्न र हरेक स्थानीय निकायमा प्राबिधिक शिक्षालयको स्थापना गरी शिप युक्त योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ ।
राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न भएकोले अव आम नागरिकको संबृद्धिको बाटो खोज्न जरुरी छ । राष्ट्रले चाहेको निकास र नागरिकले चाहेको बिकासलाई पुरा गर्नको लागि अहिलेको बाम गठबन्धन भएको र म बाम गठबन्धनको संयुक्त उमेदवार रहेको छु । यस क्षेत्रमा रहेका पछाडि परेको बर्ग समुदायको संबृद्धि गर्न , सामजिक सद्भाव पुरा गर्न , आम नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याइ समतामुलक समाजको सिर्जना गर्नको लागि मेरो उमेदवारी यस क्षेत्रबाट रहेको छ । सुखी नेपाली र संमृद्ध नेपाल भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्नको साथै यस क्षेत्रमा समानुपातिक बिकास गर्न र आम नागरिकले महसुस हुनेगरी बिकासका कामहरु सञ्चालन गर्न पनि म यस क्षेत्रमा आएको हुँ ।
यस क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक स्थलहरुको उत्खनन् गरी प्राकृतिक संग्राहालयको यस क्षेत्रमा स्थापना गर्दै पर्यटन बिकासलाई जोड आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा बौद्ध बिश्व बिद्यालयको निर्माण कार्य पुरा गर्नको लागि काम मात्र सुरु भएको छ तर त्यसलाई मूर्त रुपमा पुरा गर्न धेरै चुनौतीहरु छन् । रुपन्देहीको १ नं. क्षेत्रलाई बिकास र नागरिकको संमृद्धीको हिसावले देशकै १ नंवर बनाउनको लागि मेरो उमेदवारी रहेको छ ।
२ यस क्षेत्रमा तपाईका जितका आधारहरु के के रहेका छन् ?
आम नागरिकको चाहना अनुसार बाम गठबन्धन भएको हो । आम नागरिकले स्थिर सरकार चाहेका छन् । हामीले राम्रो कामको थालनी गरे पनि सरकारवाट बाहिरिए संगै निरन्तरता पाउन सकेको छैन । आम नागरिकले राम्रो कामको निरन्तरता चाहेको कारण मेरो जित सुनिश्चित रहेको छ । यस क्षेत्रको बिकासको लागि म हर समय लागि परेको छु ।
यस अगाडि म कृषि मन्त्री हुँदा किसानको पक्षमा धेरै काम गरेको छु । यसलाई निरन्तरता दिनको लागि आम मजदुर किसानहरु र संमृद्धिको लागि मलाई आम नागरिकले मत दिनु हुनेछ । राष्ट्रियताको पक्षमा, सामाजिक सद्भावको पक्षमा र यस क्षेत्रको बिकास गर्ने कार्य मेरो जितका आधारहरु हुन् । बाम गठबन्धनको साझा उमेदवार रहेको कारण र आम नागरिकको चाहना बाम गठबन्धनलाई जिताउने रहेकोले मेरो जित सुनिश्चित रहेको छ ।
३. तपाईको जित भयो भने यस क्षेत्रमा तपाई के के गर्नु हुन्छ ?
क्षेत्र नं. १ दशगजा देखि चुरेपहाड पाल्पासम्म फैलिएको छ । दशगजा देखि दलदलेसम्म बिशिष्टता अनुसार गुरुयोजना बनाएर बिकास निर्माणका काम गर्नेछु । पिछडिएको क्षेत्रमा, यस क्षेत्रको दक्षिण तर्फ बिकासको अनुभूति हुन सकेको छैन । सबै क्षेत्रमा समान बिकासको लागि काम गर्नेछु । यस क्षेत्रमा रहेका हरेक टोलका बाटोमा कालोपत्रे गरिनेछ ।
पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको काम पुरा गरिनेछ । सुकुम्वासी र अब्यबस्थित समस्या ५ बर्ष भित्र समाधान गरिने छ । घरवास बिहिनहरुको लागि नागरिक आवास कार्यक्रम मार्फत आवासको ब्यवस्था गरिने छ । किसानको जीवन स्तर उकास्नको लागि कृषि अनुदानको ब्यवस्था गरिने छ । कृषिलाई ब्यवसायिक गरिने छ । दलित पिछडा वर्ग र बिकासको अनुभूति गर्न नपाएका आम नागरिकहरुलाई बिकासको मुलप्रभावमा ल्याईने छ ।
कृषि , ब्यापार र उद्योगको बिकास गरी बिदेशीने युवालाई देशमै रहने वातावरण बनाईने छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ५ हजार पु¥याइने छ । यस क्षेत्रमा बौद्ध बिश्वबिद्यालयको निर्माण गरिने छ । कलेजहरुको स्तर बृद्धि गरिने छ । स्वास्थ्य चौकीको स्तरबृद्धि गरिने छ । भगवानपुर खैरेनी गोठादी मार्ग तथा बेलहीया कान्छि वजार चरङ्गे हुदै पाल्पा जोड्ने सडकलाई बैकल्पिक मार्गको रुपमा निर्माण गरिने छ । यस क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्विक धार्मिक स्थललाई संरक्षण समद्र्धन गरी पर्यटन बिकास गरिने छ । देवदह बिकास समितिको निर्माण गरिने छ । यस क्षेत्रलाई कृषि तथा पशुपालनको लागि पकेट क्षेत्रको रुपमा योजनागत रुपले ब्यवस्थापन गरिने छ ।
रोजगारी नपाएर बिदेश जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । रोहिणी खोला कजरार खोला लगायतलाई तटबन्ध गरी सिंचाईको ब्यवस्था गरिने छ । भूसतही सिंचाई नपुग्ने स्थानमा बोरिङ गरेर सिंचाई सुबिधा पु¥याईने छ । ३ वर्ष भित्रमा कृषिलाई ब्यवसायिक बनाएर आत्म निर्भर बनाउने र ५ बर्षमा कृषि उपज अन्य क्षेत्रमा पठाउने ब्वस्था मिलाईने गरी अनुदानको ब्यवस्था गरिने छ । बसोवास क्षेत्र, बजार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रलाई बिभाजन गरी बिषेश योजनाहरु संचालन गरिने छ ।
यस क्षेत्रमा खाने पानीको समस्या अति धेरै छ । राम्रोसंग शहरीकरण नहँुदा समेत नागरिकको धारामा खानेपानी आउन सकेको छैन । खाने पानीको समस्या समाधान गरिने छ । ५ वर्ष भित्र सम्पूर्ण घरमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन लागि पर्नेछु । यस क्षेत्रका नागरिकले बिकासको अनुभूति गर्न सक्ने गरी काम गरिने छ । यस क्षेत्रमा कृषि, वन वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सृजना गरी बिकास निर्माणका कामहरु समानुपातिकरुपमा गर्नेछु । दीर्घकालिन योजना बनाउनको लागि आम नागरिकको सुझाव लिएर सोही योजना अनुसार अगाडि बड्ने छु । नागरिकको संमृद्धिको लागि सदैव लागि रहने छु ।
४. यस अगाडिका प्रतिबद्धताहरु कति पुरा गर्नु भएको छ ?
मैले यस अगाडिको निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्नेक्रममा धेरै काम गरेको छु । बामगठबन्धनको सरकार भएको समयमा समाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर दोवर बनाउने कार्य भएको छ । बौद्ध बिश्व बिद्यालयको काम अगाडि बढेको छ । यस क्षेत्रमा पुलको लागि धेरै योजना पार्न अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पटक पटक धाएको छु । दलित र पिछडा बर्गको सम्मानमा कार्यक्रम आएका छन् । कृषकहरुलाई ब्यवसायिक बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना सुरु गर्न मेरो योगदान रहेको छ । लुम्बिनी सर्किटलाई ठूलो मात्रमा वजेट विनियोजन गर्न पहल गरेको छु ।
५.समानुपातिक र पारदर्शी बिकास गर्न तपाईं कसरी लाग्नुहुन्छ ?
मेरो उद्देश्य भनकै समानुपातिक बिकास हुनुपर्छ भन्ने हो । यस क्षेत्रमा रहेको दश गजाको सिमाना देखि उत्तरको दलदलेसम्म आवश्यकताको आधारमा बिकासका कामहरु सञ्चालन गर्नेछु । सबै वडाको सबै टोलमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी बिकास निर्माण र आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । आयोजनामा परेका रकम र सांसद क्षेत्र बिकास कोषलाई पारदर्शी हिसाबले आम नागरिकले जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्नेछु ।
६.अन्त्यमा देवदह साप्ताहिक मार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
शान्ति, लोकतन्त्र, स्वधीनता र स्वाभिमान सुखी जनता, समृद्ध नेपाल हाम्रो अभियान भन्ने मूल मर्मका साथ संयुक्त बामगठबन्धन निर्माण भएको हो । रुपन्देहको क्षेत्र नं.१लाई बिकास गर्नको लागि म निरन्तर लागि रहेनेछु । यो निर्वाचन भनेको जीत हारको मात्र नभई बिकास र समृद्धिका् समेत रहेको कारण आम जन समुदायलाई उपयुक्त बिबेक प्रयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा देवदह साप्ताहिकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उमेदवार
रुपन्देहीको क्षेत्र नं. १ बिकट क्षेत्र रहेको थियो । यसलाई देशकै नमुना क्षेत्रको रुपमा बिकासका कामहरु भईरहेकोले बिकासका काम पुरा गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी यस क्षेत्रबाट रहेको छ । बिकासको अत्यन्त धेरै सम्भावना भएको धार्मिक, साँस्कृतिक र अध्यात्मिक क्षेत्र , भगवान गौतम बुद्धको मावली स्थल देवदहमा भएका पुरातात्विक स्थलहरुको उत्खनन् गरी पर्यटन बिकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेका छन् । यस क्षेत्रका गाउँहरुमा होमस्टे सञ्चालन गरेर स्थानीय जनताको आम्दानी बढाउन सकिने प्रशस्त संभावनाहरु रहेका छन् । यसकामलाई साकार पार्नको लागि मेरो उम्मेदवारी यस क्षेत्रमा रहेको छ ।
यस क्षेत्रलाई कृषिमा आत्मा निर्भर बनाउन औद्योगिक बिकासका लागि करिडोर बनाउन देवदहलाई दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा प्रबद्र्धन गर्न मेरो उम्मेदवारी रहेको छ । यस क्षेत्रमा पर्ने रोहिणी नदी र कजरार नदीलाई व्यवस्थापन गरि पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि डुंगा सञ्चालन गरिने छ । नदीलाई व्यवस्थापन गर्दा जम्मा भएको पानीलाई लिप्ट सिंचाई द्वारा सिंचाई सुविधा पु¥याउन सकिने छ । अहिले विदेशिएका हजारौं युवाहरुलाई यस क्षेत्रमा नै रोजगारको सिर्जना गरी बिदेसिनु पर्ने समस्याको अन्त्य गर्न मेरो उम्मेदवारी रहेको छ । समग्रमा यस क्षेत्रका आम जनतालाई समृद्ध बनाउने मेरो योजना रहेको छ । त्यसैकारण रुपन्देहीको क्षेत्र नं.१बाट मेरो उम्मेदवारी रहेको हो ।
अघिल्लो पटक निर्वाचित भएपछि मैले जनताको घर दैलोमा पुगेर सुख दुःखमा साथ दिएको छु । संविधान बनाउनको लागि मेरो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । रुपन्देहीको क्षेत्र नं.१लाई बिकास गर्नको लागि गुरुयोजना बनाएर बिकास निर्माणका कामहरु सञ्चालन गरिरहेको छु । यस क्षेत्रलाई देशकै नमूना बनाउन योजना बनाएर अगाडि बढेको कारण मेरो जित सुनिश्चित रहेको छ । मलाई यहाँको जनताले धेरै नजिकबाट नियाल्नुभएकोले मैले यहाँका जनताको साथ पाउनेमा ढुक्क छु ।
मैले थालनी गरेका धेरै योजनाहरु पुरा गर्नको लागि पनि मैले यो निर्वाचन जित्न जरुरी छ । हामीले बोलेर होईन काम गरेर देखाउने समय आएको छ । काम गर्नको लागि म सदैव तयार छु । काम गर्नैका लागि संविधान निर्माण देखि अहिलेसम्म म क्षेत्र नं.१लाई रोजिरहेको छु । यहाँको हरेक समस्यासँग परिचित भएकै कारण र जनताले मलाई मतदान गर्नु हुनेछ । यो भन्दा ठूलो मेरो जितको आधार अरु के हुन सक्छ ?
यस क्षेत्रमा रहेका युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ । यसबाट बिदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बिकास निर्माणका कामहरु बाटो, पुल, खेलमैदान र अन्य पूर्वाधारहरुको काम पुरा गर्नेछु । रुपन्देहीको क्षेत्र नं.१लाई ५ बर्षमा कृषिमा आत्मा निर्भर बनाउन बिभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । क्षेत्र नं.१को सम्पूर्ण खेतीयोग्य जग्गामा सिचाई सुविधा पु¥याई उत्पादनमा बृद्धि गरिनेछ । क्षेत्र नं. १मा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरि सिपयुक्त दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरिनेछ । यस क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको स्थापना गरिनेछ । देवदह क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक स्थलहरुकोे उत्खनन् गरी बुद्ध मावली प्रमाणित गरिनेछ । बोर्डर देखि गोठादीमार्गको काम पुरा गरिनेछ ।
हालको बेलैया नाकादेखिा कान्छीबजार हुँदै भलूही, चरङ्गे, मुढाबास सडकलाई निर्माण गरी बैकल्पिक बाटोको रुपमा बिकास गरिनेछ । पर्यटन बिकासको लागि लुम्बिनीको गुरुयोजनामा देवदह,भवानीपुर, बैरीमाई,कन्यामाई, कुमारवर्ती, खयरडाँडा लगायतका स्थानलाई जोड्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । देवदहलाई अध्यात्मिक नगर बनाईनेछ । सहरी बिकास मन्त्रालयबाट डि.पी.आर.गराई गुरुयोजना बनाई यस क्षेत्रको बिकास गरिनेछ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनेछ ।
प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागु गरि बिदेशिने युवाहरुलाई स्वदशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरी युवालाई विदेशिनबाट रोकिनेछ । यस क्षेत्रको सहरनबारी, चरङ्गे,केउली,मुढाबास आदि स्थानहरुमा अग्र्यानिक तरकारी खेती उत्पादनका लागि बिषेश योजना ल्याईनेछ । त्यस्ता ठाउँहरुमा कृषि पर्यटनको बिकास गरिनेछ । हरेक क्षेत्रमा आत्मा निर्भर हुन सक्ने यस क्षेत्रका जनतालाई सोही अनुसारका कार्यक्रमहरु ल्याईनेछ ।
यस अगाडि मैले गरेका प्रतिबद्धताहरु ९० प्रतिशत पुरा गरेको छु । जनताको प्रतिनिधि भएर मैले आफुलाई कहिल्यै ठूलो सम्झेको छैन । जनताको प्रतिनिधि मात्र नभएर जनताको सेवक बनेर काम गरेको छु । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि चुन्ने नागरिकसँग मौलिक अधिकार रहेको हुन्छ । मैले गरेका कामको आधारमा मलाई मतदान गर्ने अधिकार नागरिक समाजसँग रहेको हुँदा विबेक प्रयोग गर्नको लागि आम जनतालाई अनुरोध गर्दछु । यदि मैले प्रतिबद्धता गरेका बाचाहरु पुरा नगरेको भए त मैले जनता सामु जाने आँट नै गर्ने थिईनँ नि । मैले जनताको हर सुख दःखमा साथ दिएकोले नै फेरी जनतामाझ जाने आँट गरेको हुँ ।
रुपन्देहीको क्षेत्र नं.१ दशगजा देखि पाल्पासम्म फैलिएको छ । यस क्षेत्रमा रहेका हरेक टोलहरुको समान बिकास हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यस क्षेत्रमा रहेका हरेक टोलमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको अवसर तथा बिकास निर्माणका कामहरु समानरुपले गर्न प्रयत्नरत रहनेछु । मैले गर्ने सम्पूर्ण कामहरु पारदर्शीरुपमा गरिरहनेछु ।
क्षेत्र नं.१ बाट प्रकाशित हुने देवदह साप्ताहिक नागरिकको लागि मुखरित हो । यसले समाजमा घटेका घटनाहरुलाई उजागार गर्दै राज्यलाई समेत घच्घच्याउने काम गरिरहेको छ । राज्यले गरेका कामहरु नागरिकको बिचमा लैजाने मुख्य भूमिका खेलेको देवदह साप्ताहिकलाई भविष्यमा निश्पक्ष रुपमा समाचार सम्प्रेषण गरि लोकतन्त्रको चौथो अंगको रुपमा भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु । यस क्षेत्रबाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएकोले आफ्नो मत बिबेकपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्नुहुन आम जन समुदाय सामु हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।